Ireo toerana 6 ilaina hitsidihana ao Fuerteventura | Fitsangatsanganana tanteraka
Ireo toerana 6 ilaina hitsidihana ao Fuerteventura
Fitsangatsanganana tanteraka | | Nosy Canary
Tapitra ny fahavaratra ary manomboka ny fararano, vanim-potoana iray mampiavaka ny fihenan'ny ora antoandro, ny fihenan'ny maripana, ary ahoana no fomba hafa, ny fiverenana amin'ny fahazarana. Singa maromaro izay antony mahatonga ny soritr'aretin'ny fialan-tsasatra apetraky ny ankamaroan'ny mponina. Aza manahy fa ny volana septambra, oktobra ary novambra dia mitovy dika amin'ny fitsangatsanganana, indrindra raha ataontsika izany toerana talaky masoandro toa an'i Fuerteventura.
Ny masoandro dia miposaka mandritra ny 300 andro isan-taona ao amin'ny nosy nosy Canary any amin'ny Oseana Atlantika. Fotoana iray tsy manam-paharoa hankafizanao ity nosy fahavaratra mandrakizay ity ao amin'ny iray amin'ireo hotely tsy misy olon-dehibe ihany ao Fuerteventura, raha ny morontsiraka maherin'ny 150 kilometatra kosa dia mahatsiaro anao ho paradisa. Aza adino ireo toerana ilaina hitsidihana ao Fuerteventura ireo.
1 Valan-javaboary any an-tendrombohitra Corralejo
2 Saikinosy Jandía
3 Villa an'ny Betancuria
4 Ny zohy any Ajuy
5 Ilay tendrombohitra masin'i Tindaya
6 Tranom-bakoka Majorero Cheese
Valan-javaboary any an-tendrombohitra Corralejo
35 kilometatra monja no manasaraka an'i Puerto del Rosario, renivohitr'i Fuerteventura, amin'ny Natural Park an'ny Dunes of Corralejo. Ity velaran'ny fasika voajanahary (izay avy amin'ny fanaparitahana sy ny fanimbana ny akoran'ny molotra, bivalves, ary koa ireo zavamananaina an-dranomasina hafa) dia manana velaran-tany fasika maherin'ny 2.600 hektara. Ny lafin'ny efitra amin'ity faritra arovana ity dia manafina ny iray amin'ireo morontsiraka paradisaatika indrindra ao amin'ilay nosy, Morontsiraka Cofete. Miaraka amin'ny fasika fotsy 12 kilaometatra sy rano turquoise XNUMX kilometatra, ity toerana ala ity any avaratry ny saikinosy Jandía dia manome fahalalahana sy fitoniana tsy azo faritana ny mpandeha.
Tafasaraka amin'ny sisa amin'ny Fuerteventura amin'ny Isthmus of the Wall, any atsimon'ny nosy, ny Saikinosin'i Jandía dia iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Canary. Faritra efitra izay ahafahanao mahafantatra ny faritra be ala indrindra amin'ny nosy fahavaratra mandrakizay. Tendrombohitra manjavozavo izay mankamamy ny endemisma zavamaniry maro karazana toy ny mariky ny Fuerteventura, ny cardón de Jandía. Ny fitsidihana ity toerana majika ity dia tsy misy tsara kokoa noho ny mijanona ao amin'ny Iberostar Selection Fuerteventura Palace, trano fandraisam-bahiny manana fidirana lehibe amin'ireo lalana maloto izay mifandray amin'ny Saikinosy Jandía.
Villa an'ny Betancuria
Ny tanànan'i Betancuria dia naorin'i Jean de Bethencourt tamin'ny 1404, ilay mpandresy voalohany ny Nosy Canary. Ity tanàna kely any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy ity I renivohitry ny fitantanan'i Fuerteventura hatramin'ny 1834Na dia izy aza no tanàna kely mponina amin'izao fotoana izao ary misy mponina 800 fotsiny. Na dia tsy manana moron-dranomasina paradisa aza ity tanàna misy tranobe fotsy mahazatra ity dia ny teboka mahaliana indrindra amin'ny nosy. Mpizahatany an-jatony maro no mitsidika an'io toerana io isan'andro mba hitsidika ny fiangonan'i Santa María de Betancuria, miorina eo afovoan-tanàna, na ny Archaeological Museum, izay ahafahan'ny mpitsidika mahita ny fomba niainan'ny mponina taloha.
Ny zohy any Ajuy
Ajuy no faritra ara-jeolojika mahaliana indrindra ao amin'ny nosin'i Canary. Ity tanàna fanjonoana kely misy mponina 150 ity, miorina eo amin'ny morontsiraka andrefana Fuerteventura, dia miavaka amin'ny morontsiraka fasika mainty tsara voahodidin'ny hantsana ary, indrindra, ho an'ireo lava-bato voajanahary. Ny atin'ny lava-bato Ajuy, nanambara ny tsangambato voajanahary ary nekena ho iray amin'ireo faritra zato mahaliana indrindra ara-jeolojika an'izao tontolo izao avy amin'ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny siansa jeolojika (IUGS), mamela ny mpandeha hahafantatra ny niandohana sy ny fananganana an'i Fuerteventura 70 tapitrisa taona lasa izay. Fitsangatsanganana majika mankany amin'ny lasa amin'ny nosy izay ahafahanao mahita ireo vato tranainy indrindra ao amin'ny Nosy Canary, ao amin'ilay antsoina hoe Basal Complex.
Ilay tendrombohitra masin'i Tindaya
Ny havoanan'i Tindaya dia eo avaratra andrefan'ny Fuerteventura, eo akaikin'ny tanàna tsy fantatra anarana ao amin'ny tanànan'i La Oliva. Nanambara tsangambato voajanahary tamin'ny taona 1994 noho ny velaran-tany lehibe sy ny lanjany ara-jeolojika, satria izy no tandindona indrindra amin'ny nosy, ity toerana ity dia fantatry ny sokitra podomorphika efa ho 300 (sary sokitra vato miendrika tongotra) natao ho an'ny kolotsaina aborigin'ilay nosy. Ny majos na majoreros, mponina taloha tao Fuerteventura, dia nihevitra an'i Tindaya ho tendrombohitra masina ary nanendry fananana majika ho azy. Raha ny marina, ny Tindaya dia malaza amin'ny anarana hoe "Mountain of the Witchches".
Tranom-bakoka Majorero Cheese
Tsy afaka miala amin'i Fuerteventura isika raha tsy mankafy ny sasany amin'ireo vokatra mahazatra amin'ny gastronomie manankarena. Na dia maro aza ny mpandeha tsy mahalala, Fuerteventura dia mamokatra iray amin'ireo fromazy osy tsara indrindra eto an-tany, araka ny eken'ny World Cheese Championships, manome ny fromazy Majorero Maxorta ho tsara indrindra eto an-tany amin'ny sokajy fromazy ronono osy efa sitrana amin'ny tsiro. Amin'izany fomba izany, ireo izay tia an'ity sakafo ity dia tsy afaka manadino ny tranom-bakoka Majorero Cheese, izay ahafahan'izy ireo mamantatra ny niandohana sy ny famokarana vokatra iray izay ekena eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ireo toerana 6 ilaina hitsidihana ao Fuerteventura
Inona no ho hitanao ao Biarritz
Tanàna tsara tarehy akaikin'i Barcelona